I-Sony A7R III, i-mirror ngaphandle kwe-megapixels ezingama-42 kunye nokurekhodwa kwevidiyo ye-4K | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | Ukufota
AbakwaSony bazise ilungu elitsha losapho lwe-A7, lolunye uthotho oludumileyo lwenkampani kunye necandelo. Oku kutsha I-Sony A7R III ngumzekelo onika ibhetri engaphezulu; ngenkqubo engcono yokujonga ngokuzenzekelayo; iprosesa yomfanekiso ngokukhawuleza kunaleyo isetyenziswe kwinguqulelo yangaphambili; Y ixabiso elingaphezulu kwama-3.000 euros.
Ngokunjalo, i-Sony A7R III entsha imiselwe ukuba ibe yenye yeemodeli eziqhuba kakuhle kwezi nyanga zilandelayo kwaye iya kuqhubeka nokuba yinto enqwenelekayo ngabathandi kunye neengcali. Ukuqalisa, I-Sony A7R III iya kuba ne-42,7 megapixel Exmor R CMOS sensor isisombululo esifumene utshintsho olwenziwe nguSony ekufezekiseni iziphumo ezikumgangatho ophezulu kunye nengxolo encinci.
Okwangoku, i Iprosesa yomfanekiso yi-Bionz X eyi-1,8 ephindaphindwe ngokukhawuleza kunakwisizukulwana esidlulileyo kunye ne-5-axis umfanekiso we-stabilizer wongezwa, ucocekile ukuxhasa imifanekiso yesisombululo esiphakamileyo, kunye ne-shutter ephantsi yokuhambisa ukungaphumeleli kwe-10 Fps.
I-Sony A7R III ikwanesikhangeli sokujonga ngombane. Le yeyodidi I-OLED ngesisombululo se-720p (Ingcaciso ephezulu). Ewe kunjalo, siya kuba nescreen esingasemva apho sinokuzixhasa khona ngokubanjwa okuthile kwaye sibone zonke iimenyu. Ngale nto ongenasipili uthanda bamba iifoto kwifomathi yeJPEG kunye neRAW.
Inxalenye yevidiyo ikwangumlinganiswa ophambili kule Sony A7R III. Kwaye kungenxa yokuba yongeza kwifayile ye- Ukurekhodwa kwevidiyo ye-4K kwii-120 fps. Ewe ungayenza kumgangatho opheleleyo we-HD ngenqanaba elifanayo lesakhelo.
Ngokumalunga nonxibelelwano, uya kuba nethuba lokwenza njalo yabelana ngemifanekiso nge-WiFi nge efowuni okanye ipilisi xa ukude nekhaya. Kananjalo, uya kuba nohlobo C lwe-USB v.3.1. I-Sony A7R III ine-slot ezimbini ze-SD kwaye ibhetri yayo inokuzimela okukhulu, nangona u-Sony engacacisi ukuba zingaphi iifoto esinokuzifumana ngentlawulo enye.
Ekugqibeleni, I-Sony A7R III iya kuvela kwiimarike zaseYurophu ngoNovemba olandelayo (Ayichazwanga kususela ngaluphi usuku). Nangona, ewe, lungisa ipokotho yakho ukuba ufuna ukuyifumana kuba Ixabiso layo liqala kwi-3.500 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukufota » I-Sony A7R III, isibuko esitsha esingenasipili esinee-megapixels ezingama-42 kunye nokurekhodwa kwevidiyo kwe-4K